Umthandazo wokusikelela ukutya. ? [kunye nokutya kuThixo]
Umthandazo wokusikelela ukutya Lisiko elihlala lisebenza kude kube namhlanje kuzo zonke iintsapho.
Kuyinxalenye yoqeqesho lwabantwana kwaye iyinto ethi nasezikolweni iphunyezwe njengokufundisa.
Ukubaluleka kokwenza lo mthandazo kuxhomekeke ekubeni sibe nombulelo, ekuxabiseni ukutya esikuthethileyo nasekuceleleni abo bangenawo.
Sisenzo sokubulela kuThixo osinike amandla okusebenza, siye kuthenga ukutya, asinike ubulumko bokuzilungiselela kunye nentsikelelo yokuba nosapho ukuze sabelane nabo.
Kwimeko apho kungekho sapho etafileni, kusafuneka sibulele kuba kukho abantu abangakwaziyo ukutya, nto leyo kungengenxa yokuba bengenako, kodwa ngenxa yokuba bengakwazi ngenxa yezizathu zempilo okanye ezinye iimeko, oku kufuneka kusenze sizive sinombulelo kwaye Enye yeempawu ezibonisa oku kukuthandaza umthandazo omncinci ngaphambi kokutya.
1 Umthandazo wokusikelela ukutya Ngaba womelele?
1.1 Umthandazo wokusikelela ukutya
1.2 Umthandazo wokubulela ngokutya
1.3 Umthandazo wokutya
2 Ngaba kufuneka ndithandaze kuyo yonke imithandazo?
Umthandazo wokusikelela ukutya Ngaba womelele?
Yonke imithandazo inamandla logama nje kwenziwa ukuba bakholelwe kumandla abo.
Ukutya okusisipho sisenzo sokholo apho singaneli nje ukubulela kodwa sicela nokutya ukuba kwehle emzimbeni wethu, ukuvelisa, ukuze bangayeki ukuba etafileni yethu kwaye basinike izibonelelo zesondlo Yiza nganye nganye.
Kwelinye icala singacela abo basweleyo kwaye abanakutya etafileni yabo, abanokutya kuphela ukutya okuncinci, sicela abo bangazukubanika abantwana babo, abo balambayo kwaye abanayo Izixhobo zokuwanelisa.
Umthandazo wokusikelela ukutya nokutya uqinile kuba kukho ukholo.
Njengoko ubona, ayisiba nje ukubulela ngokutya, sisenzo sokholo kunye nothando kwabanye apho sizibeka khona endaweni yomnye kwaye sicele iimfuno zabo.
Xa umthandazo usenziwa ukuba wazi imfuno yomnye kwaye sicela ukulingana kwethu sibonisa uthando lukaThixo ebomini bethu.
Nkosi Thixo; imithombo yeendaba ukuze kweli Cwecwe kukho ukunxibelelana kobubele phakathi kweendwendwe;
Igqwetha ngokutya osinike kona namhlanje ukuba kungabi yingeniso nje;
Myeke lowo ongasityanga Ezama isiqhamo sendalo yakho entle.
Siyakuthanda, Thixo uBawo, kwaye sinombulelo ongazenzisiyo ngokwabelana ngale mihla usinike yona.
Singawuqala umthandazo ngokubulela ngethuba elisinike lona nguThixo ukuze sikwazi ukuzondla ngokuchanekileyo.
Emva koko singacela umntu othathe inkathazo ukuba alungiselele ukutya ukuze sikutye, kulowo uncede kuyo yonke le nkqubo ukuze oku kutya kufikelele etafileni yethu.
Sicela abo bangenayo kwaye bacele isonka semihla ngemihla ukuba sifakwe ezandleni zomntu ngamnye kwaye, ekugqibeleni, sinombulelo kwakhona ngommangaliso wobomi.
Umthandazo wokubulela ngokutya
Utata oyiNgcwele; namhlanje siyakucela
Ngamana ungasijoyina kule tafile kwaye usikelele isonka esiya kusiva umzuzwana; Oko kuthetha ukuba ezi ziqhamo zempilo yethu kwaye ungamshiyi lo mntu usokola ukufumana ukuluma.
Siyakudumisa, Nkosi, kwaye ubabalo lwethu lufutshane ngokuba sinenhlanhla kangakanani kokutya!
Sazise malunga nothando lwakho kunye nokukhanya indlela ekhokelela kwigumbi lakho.
Umbulelo lilungelo eliboniswa bambalwa kakhulu namhlanje, siphila kwihlabathi elihamba ngesantya esiphezulu kwaye bambalwa kakhulu abayeke ukubulela.
Kwilizwi likaThixo kukho ibali elibalisa ibali labathile abaneqhenqa, awathi uYesu wabanika umqondiso wokuphiliswa, kwasala namnye kuye.
Amaxesha amaninzi oku kwenzeka ebomini bethu.
Sikhathalele ukutya, ukuzondla kodwa ukungabongi kwaye yinto ekufuneka yenziwe ebomini bethu.
Usikelele namhla, Bawo wethu, kuye wonke umntu okule tafile.
Mbongeni umntu olungisa ukutya; Sikelela lowo ubavumeleyo ukuba abe lapha; Sikelela, ukongeza, lowo uhlakulele nganye yezi.
Utata oyiNgcwele! Ngethamsanqa osinike lona namhlanje, sinombulelo ongazenzisiyo kwaye ngesisa esingapheliyo sokunqula nokudumisa ngesonka osibeka kule tafile namhlanje.
Owona mzekelo mhle wokuthandazela ukutya ubonwa kuYesu waseNazarete owayebulela ngokutya abakutyileyo.
Kukho imimangaliso elinde a umthandazo ukufikelela kuthi kwaye ummangaliso wokutya kwemihla ngemihla unokuba yenye yazo.
Kula maxesha abonakala ngathi kunzima kakhulu ukubulela ngomthandazo ilungelo lokufumana ukutya esikudingayo sisenzo sokholo nothando sikaThixo.
Ngaba kufuneka ndithandaze kuyo yonke imithandazo?
Kuya kufuneka ukuba uthandaze kuphela ngaphambi kokuba utye. Into onokuyenza kukuthandaza ngokwahlukileyo kwisidlo ngasinye.
Inokwahluka imihla ngemihla, iveki ukuya evekini okanye kwinyanga nenyanga.
Soloko ukhumbula ukuba into ebalulekileyo kukuba nokholo kuThixo weNkosi yethu. Ukholo kunye neenkolelo zisisiseko salo nawuphi na umthandazo.